GOAL (မဟုတ်) အဆိုပါကိတ်ကွင်းမှာအခိုးခံရ! | Holmbygden.se
အပေါ် Posted 10 ဇန္နဝါရီလ, 2014 အားဖြင့် Holmbygden.se
ရေခဲကိတ်ကွင်းဘို့စောင့်ဆိုင်းနေမှုများကိုထည့်သွင်းတွက်ချက်ရပါမည်နေစဉ်ယခုစုံလင်သောရေခဲနှင့်အတူဘုရားကျောင်းဂလားပင်လယ်အော်ထဲမှာ uppskottad ကိတ်ကွင်းဖြစ်ပါသည်!
အဆိုပါရည်မှန်းချက်ယခုပွနျလညျရှာဖှတှေ့ဖြစ်ပါတယ်! ကံကောင်းတာကကြောင့်အခိုးခံရမခံခဲ့ရ, ဒါပေမယ့်ရံဖန်ရံခါထိန်းချုပ်ထားအခြေအနေအရချေး.
Anund Manor School မှာmålburarnaတစ်ခုမှာခိုးယူခဲ့ကြပုံရသည်! ဤသည်ဝမ်းနည်းဖွယ်သတင်းကိုကျောင်းမှာခရီးစဉ်အတွင်းမနေ့ကရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်. တစ်ဦးတည်းသာယင်းလှောင်အိမ်၏, အထက်ပေါ်, ထို့နောက်ထွက်ခွာသွားခဲ့သည်. အဆိုပါပျောက်ကွယ်သွားသည့်အခါအဘယ်သူမျှမပိုနီးစပ်အရိပ်အယောင်ရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်အများဆုံးဖွယ်ရှိမကြာသေးမီကဒီဇင်ဘာလ-ဇန်နဝါရီလ.
Sundsvall မြူနီစီပယ် Holmes ပိုမိုရှင်းလင်းရန်မပြုခဲ့
အခြားတစ်နှစ်ဈAnundgårdတစ်စုံတစ်ဦးကိုရုတ်တရက်ဖယ်ရှားကိတ်ကွင်းအသိပေးစရာမလိုဘဲ Sundsvall မြူနီစီပယ်ယူ. ဒါဟာပုံထက်ပိုသောအခြားနေရာများတွင်လိုအပ်. ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကသူတို့ဆိုရေခဲရှင်းလင်းရန်မဟုတ်ထင်, ဒါပေမဲ့ကနေဖိအားအပြီး #ShepherdsHut သူတို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ထိုသို့ပြုကြသည်.
ယခုနှစ်တွင်မြှို့နယ်ကိုထပ်မှာအားလုံး Holmes အတွက်ရေခဲကိတ်ကွင်းစုစည်းဖို့စီစဉ်ထားဘူး. HBU ယခုတစ်ဖန် Sundsvall စည်ပင်သာယာနှင့်အဆက်အသွယ်ရှိခဲ့ငါတို့သည်သူတို့လညျးကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူဒီအပေါ်ခုတ်လှဲသင့်ကြောင်းမထီမဲ့မြင်အောက်သည်ထင်ကြောင်းကြေညာလိုက်ပါတယ်. အခွန်ပိုက်ဆံပင် Holmes နေထိုင်သူများအားဖြင့်၎င်း, ပြုလုပ်ခဲမဆိုဝန်ဆောင်မှုပြန်ကျေးလက်သှားဖို့မထင်ထားဘူးကြောင်းစိတ်ပျက်စရာဖြစ်ပါသည်.
HBU ယခုမှအဖြေတစ်ခုညှိနှိုင်းထားပြီး. အသေးစိတ်ရိုက်ကြသည်မဟုတ်, ဒါပေမဲ့ရေတို, ဒီမြှို့နယ်ကအနည်းဆုံးပြင်ဆင်ထားရေခဲအောင်သေချာသည်ဟုဆိုလိုသည်. ထိုအခါငါတို့သည်ကိုယ်ကိုကိုယ်ကအပြေးကိုစောင့်ရှောက်ရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်. မြှို့နယ်များတွင်အခြားနေရာများတွင်မလိုအပ်ကြောင်းတစ်ဦးကဖြေရှင်းချက်, ဒါပေမယ့်ပုံမရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်တခုဖွင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရေခဲမှုများကိုထည့်သွင်းတွက်ချက်ရ. အဆိုပါကိတ်ကွင်းမကြာမီ flushing စတင်မည်!
ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလ၌အကိတ်ကွင်းဖြစ်နိုင်သောစေ HBU ရဲ့အဖွဲ့ဝင်အတော်များများကကျေးဇူးတင်စကား!
ထိုအခါငါတို့အသင်းကကိတ်ကွင်း၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများအတွက်ထောက်ပံ့ငွေလျှောက်ထားရပါမည်, ကျွန်ုပ်တို့လျှောက်လွှာအတွက်ငါတို့၏ကိုယ်အင်္ဂါအသိအမှတ်ပြုရမည်. ထို့ကြောင့်များစွာကို Holmbor က Holmes အတွက်ရေခဲကိတ်ကွင်းရှိသည်ဖို့တောင်းဆိုချက်ကိုနောက်ကွယ်မှသည်အဘယ်အရာကိုပြသနိုင်. HBU တို့ကိုကြီးမားတဲ့မကြာသေးမီကလာမည့် HBU ပူးပေါင်းသူကိုလူတိုင်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ် 2014 နှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာကျွန်တော်တို့ကိုဒီနှစ်ရေခဲကိတ်ကွင်းရှိသည်ဖို့ခွင့်ပြု!
ပံ့ပိုးမှုကိတ်ကွင်းနှင့် HBU သင်တို့နှင့်အတူရှိ! တစ်ခုသာ femtiolapp များအတွက် HBU အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်လာအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ.
(“အခုတော့ join” စဉ်အတွင်းတွေ့ရှိခဲ့ “ထိတှေ့” မီနူးထဲမှာ။)
ဒီရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလတစ်ခုရေခဲ-ဒစ္စကိုနှင့်အတူပြီးခဲ့သည့်နှစ်လူကြိုက်များဖြစ်ရပ်ပြန်လုပ်မှ HBU အစီအစဉ်. ဖြစ်နိုင်သည်နောက်တော်သို့လိုက် “အရက်ဆိုင်ညနပေိုငျး” trubadur-သူ Mike နှင့်အတူ. ကျနော်တို့ကဒီအကြောင်းပိုမိုသတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူပြန်လာကြလိမ့်မည်. ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကရေခဲ-ဒစ္စကိုကနေကောင်းတဲ့ဓါတ်ပုံတွေကိုဖတ်ပါ, ကြည့်ရှု